Escape Condos Suites-Mae Phim
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguYi
Indawo ephambi kolwandle ngokupheleleyo enemibono emangalisayo. Yonwabela eyakho iparadesi yolwandle xa uhlala nathi. IMae Phim Beach yenye yezona ndawo zikhula ngokukhawuleza elunxwemeni eThailand kwaye ziiyure ezi-2 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iBangkok Suvarnabhumi okanye iyure enye ukusuka ePattaya. Le ndlu ikumgama nje ohamba umzuzu ukusuka kwindawo zokutyela kunye neebhari, kodwa ikwindawo yayo efihlakeleyo neyingqondi ikunika imvakalelo yolwandle lwabucala kunye nobona bumfihlo.
Ucoceko kunye nokucoca:
Ekupheleni kwayo yonke intlawulo, iqela labacoci abaziingcali liya kubulala iintsholongwane kwaye licoce indlu yonke. Amashiti, iileyile, imiqamelo, iitawuli kunye nezinto ezilahlwayo nazo ziya kutshintshwa ukuze kuqinisekiswe umgangatho womgangatho kubathengi bethu.
Siza kubonelela ngenkonzo yokucoca yaphakathi kwindawo yokuhlala kwiindwendwe ezihlala ngaphezulu kweveki, kwaye siya kuzibuyisela iitawuli endaweni yazo. Nangona kunjalo, nakuphi na ukuzaliswa okongeziweyo kwezibonelelo kunye nezicelo zokucoca ziya kuhlawulwa ngokwahlukeneyo.
Ukhathalelo lweNdlu kunye noKhuseleko lokusiNgqongileyo:
Siyakuxabisa ukuba undwendwe luyinonophela ngokufanelekileyo iyunithi ngokungathi yeyabo. IiNdawo zokuHlala zithatha inxaxheba kwinyathelo lokuqala lokuhlaza ukunceda ukunciphisa unyawo lwekhabhoni kwizizukulwana ezizayo. Nceda uqinisekise ukuba i-air conditioner kunye nezibane zivaliwe xa zingasetyenziswa.
Le ndlu ibekwe kanye kwindawo ethe cwaka elunxwemeni kweyona ntliziyo ye-Mae Phim Beach umgama nje ohambahamba ukusuka kuzo zonke iindawo zokutyela kunye neebhari.
Umbuki zindwendwe ngu- Yi
Hi, I am an avid world traveller and I am more than happy to be your host in Thailand. Hope you enjoy Thailand as much as I do.